သားလေးကြောင့် ဖြစ်တည်လာတဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ ဘဝအကြောင်း | Duwun
မယ်လိုဒီဟာ သားလေးကြောင့် ဖြစ်တည်လာတဲ့ သူမရဲ့ ဘဝအကြောင်းတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်. သူမရဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်က အသက် ၃ နှစ်ကျော် ၄ နှစ် အရွယ်ကို ရောက်နေပါပြီ.
မယ်လိုဒီဟာ မိသားစုနဲ့ အတူ ခရီးတွေ ထွက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်. ခရီးတွေ ထွက်ဖြစ်တာကလည်း သားလေးအတွက် ဗဟုသုတ တိုးစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ထွက်တာလို့လည်း ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်. လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဘဝလေးက ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိလာတယ်လို့လည်း ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်.
'' သားကြောင့်ဘဝပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိလာသလို လူဖြစ်ခွင့်ပေးတဲ့ အမေကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်. သားလေးကြောင့်စိတ်ဓာတ် အင်အားတိုးရပါတယ် .မေတ္တာပို့ပေးသူအားလုးံကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်. ၇ရက်သားသမီးအားလုးံ သက်ရှည် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ လိုရာဆန္ဒ ပြည့်စုံကြပါစေရှင်'' ဆိုပြီးတော့ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီ ၅၂ မိနစ်က သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.
သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီ မယ်လိုဒီရဲ့ သားလေးကတော့ အခုဆိုရင် ၃ နှစ်ကျော်အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ကတည်းက ကျောင်းစတက်နေရပြီလို့ သိရပါတယ်။ သားသားရဲ့ ကျောင်းသွားကျောင်းပြန် ချစ်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း မယ်လိုဒီက ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ မကြာခဏတင်ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးအရွယ်ကနေ ဒီနေ့ အချိန်ထိ အားပေးလာကြတဲ့ သိဒ္ဓိစစ်လေးရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အချစ်ပိုလို့နေပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်မယ်လိုဒီနဲ့ သူ့ရဲ့ သားလေး သိဒ္ဓိစစ်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာ မျက်နှာပေါ်မှာ မကြာခဏဆိုသလို တင်လေ့ရှိပြီး မယ်လိုဒီကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သားလေးသိဒ္ဒိစစ်အပေါ် အချစ်တွေပိုခဲ့ ရပါသေးတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ အခုလက်ရှိမှာ ဗီဒီယိုဇာတ်ကား၊ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကိုလည်း လက်ခံရိုက်ကူး နေပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မယ်လိုဒီဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုသာကောင်း. သားလေး သိဒ္ဓိစစ် တို့နဲ့ အတူ မကြာခဏ အလှူအတန်းတွေ လုပ်ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်. အဲ့ဒီနောက် အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်နေတဲ့ ကြားက မိသားစုကိုလည်း အချိန်ပေးနိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်. သူမရဲ့ မိသားစုလေးကိုတော့ ပရိသတ်တိုင်းက ချစ်ခင်အားပေးလျှက်ရှိပါတယ်.